PCOD को उपचार के हो? Polycystic ovary syndrome को लक्षण, कारण र उपचार। – Noor Health Life
PCOD को उपचार के हो? Polycystic ovary syndrome को लक्षण, कारण र उपचार।
के तपाईलाई थाहा छ PCOD युवा युवतीहरूमा हुने दर्दनाक रोग हो? लूट यो छ कि औषधि ग्रीक मा एक सफल उपचार हो। वास्तवमा, आधुनिक समयमा महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्य को लागी पुरुषहरु भन्दा बढी चिन्तित छन्, उनीहरु आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिन्छन्। यो अवस्था वृद्ध महिलाहरुमा पनि बढी देखिन्छ ।यो एक प्रकारको रोग हो जुन तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।जसले महामारीको रुप लिइरहेको छ । 10 मध्ये 8 जना महिलालाई यो जुत्ता रोगको निदान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा भिक्टोरिया मेडिसिन कलेज एन्ड्रयूज लण्डनस्थित स्त्री रोग संस्थानले गरेको भर्खरै गरिएको सर्वेक्षणले भारतमा यो रोगप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ तर भारत सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै प्रगति गरेको छैन । निजी ग्रीक चिकित्सा संस्थानहरूले यस रोगबाट बचाउनको लागि ठूलो अनुसन्धान गरेका छन्। अल्हम्दुलिल्लाह, सयौं संक्रमित बिरामी निको भइसकेका छन्, जबकि आधुनिक चिकित्साले शल्यक्रिया बाहेक कुनै उल्लेखनीय उपचार पाउन सकेको छैन।
कारणहरू के हुन्?
१-: आहारको असन्तुलन, बोसो, बोसो, अमिलो भएका खानेकुराको उपभोग,
२- बेलैमा खाना खानु, राति खाना खानु र तुरुन्तै सुन्निने,
३-: समयमै निन्द्रा नलाग्नु, समयमै उठ्नु,
४- महिनावारी ढिलो हुनु,
5- हार्मोनल विकार र अनपेक्षित हर्मोन को स्राव
६-: प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा, फाइब्रोइड परीक्षणमा पाठेघर र पाठेघरको पाठेघर र पाठेघरको ट्युमरहरू हत्केलाको कर्नेल वा चना बराबरको देखिन्छ।
7-: धेरै जसो ट्युमर फाइब्रोइडहरू आकारमा सानो र संख्यामा धेरै ठूलो हुन्छन् जसलाई मल्टिपल सिस्ट भनिन्छ।
८-: यो रोग सामान्यतया यौवन र रजोनिवृत्ति को उमेर बीच कुनै पनि समयमा हुन सक्छ।
९- अनियमित महिनावारीले रोग झन् बढाउँछ।
१०-: बारम्बार रगतको विकार भएमा पनि यो रोग लाग्ने डर प्रबल हुन्छ ।
11-: यदि थाइराइड ग्रन्थी बिग्रिएको छ भने PCOD अनिवार्य छ। पाठेघरमा गाँठो बन्छ। कहिलेकाहीँ घाउमा गाँठहरू हुन्छन्। जुन निकै पीडादायी हुन्छ ।
12- गर्भनिरोधक चक्कीहरू जस्तै बच्चा नजन्माउने वा परिवार नियोजनको क्रममा ढिलो हुने महिलाहरूले यस कारणले हार्मोनल चक्की वा चक्कीहरू प्रयोग गर्छन्। साइड इफेक्टहरूमा अंडाशय वा पाठेघरमा गम्भीर गाँठहरू समावेश हुन्छन्।
१३-: पेटको छेउमा वा नाभिको मुनि गरिने कुनै पनि प्रकारको शल्यक्रिया।
१४- गम्भिर डिप्रेसनका बिरामी यस रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।
१५-: अत्याधिक यौनसम्पर्क वा धेरै संभोगले पनि धेरै बिरामीमा PCOD हुने गर्छ।
१६- यौन दुर्व्यवहारले पनि यो रोगलाई निम्तो दिन्छ।
१७- धेरै उमेरमा विवाह गरे पनि महिलालाई यो रोग लाग्ने गर्छ ।
18- धेरै भिटामिन र तरल पदार्थको कमीले पनि PCOD निम्त्याउँछ, उदाहरणका लागि, भिटामिन सी, भिटामिन के, भिटामिन डी, आइरन, फोलिक एसिड आदिको गम्भीर कमी।
लक्षणहरू के हुन्?
1-: नाभिको दुबै छेउ र पछाडि दुखाइ र तनाव हुन्छ।
2-: बिहान निद्राबाट ब्यूँझँदा चिन्ता बढ्छ।
३- बिहान उठ्दा वाकवाकी लाग्ने र वाकवाकी लाग्ने र चक्कर लाग्ने पनि हुन्छ ।
४- बिरामी गर्भवती भएको ठान्दा नाभिको वरिपरि सुन्निने ।
५-: दिसा र पिसाब सफा रहँदैन।
६-: सेतो ओसिलो लेकोरियाले सधैं गुनासो गर्छ।
७-: अनुहार सेतो वा पहेंलो र सुकेको रहन्छ।
८- भोक नलाग्ने ।
९-: समयमै कपाल झर्न थाल्छ ।
10- विचारहरू परिवर्तनशील, छरिएका र नकारात्मक हुन्छन्।
11- महिनावारी अकालमा र कडा दुखाइ संग आउँछ।
१२-: गर्भावस्था रोकिदैन।
१३-: कतिपय बिरामीलाई ढाड दुख्ने समस्या पनि हुन्छ ।
14-: निद्राको तीव्र कमी।
15- अविवाहित महिलाहरूमा भन्दा विवाहित महिलाहरूमा लक्षणहरू धेरै गम्भीर र पीडादायी हुन्छन्।
१६-: मुड चिडचिडा हुन्छ।
१७- कतिपय मध्यम उमेरका महिलामा यो रोग लाग्दा समयअघि नै महिनावारी बन्द हुन्छ ।
१८-: कहिलेकाहीँ बिरामीलाई उच्च ज्वरो पनि आउँछ।
19-: टाउकोको आधा भागमा कडा दुखाइ।
२०-: कतिपय बिरामीमा रक्तचाप पनि बढ्न थाल्छ।
उपचार भनेको के हो?
प्रारम्भिक उपचारमा बिरामीको निदानमा केही कठिनाइहरू हुन्छन्, बिरामीले लाज र हिजाबमा आफ्नो पीडा पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन।
सोनोग्राफीमा श्रोणि क्षेत्र सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
पल्स तिखो र ट्रान्सभर्स देखिन्छ। तापक्रम अलिकति बढी छ, मुड तातो छ।
आहार र आहार:
सबै प्रकारका अचारहरू जस्तै कागती, टमाटर, दही, अचार। उपचार पूरा नभएसम्म ठूला मासु, बन्दाबी, बैंगन र सम्पूर्ण अन्नका साथसाथै तेलयुक्त खानेकुराहरूबाट कडाईका साथ त्याग्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
अल्लाहको प्रशंसा हो। ग्रीक औषधिमा औषधिको रूपमा हरेक रोगको लागि प्रिस्क्रिप्शन हुने विशिष्टता छ। सही निदान अनुसार मात्र औषधिहरू लेख्नुहोस्।
१० ग्राम सामन पेस्ट, १० ग्राम कलेजोको पेस्ट, ५ ग्राम केसरको पेस्ट, दिनमा ३ पटक।
सफिक्स डन्डी रातो ५ ग्राम, सफोक मोइश्चर फेमिनाइन ५ ग्राम, सादा पानीसँग दिनमा दुई पटक प्रयोग गर्नुहोस्। हल्का स्वास्थ्य जीवन र गरिबलाई मद्दत गर्नुहोस् यदि तपाईंले कसैलाई सहयोग गर्नुभयो भने, भगवानले तपाईंलाई समर्थन गर्नुहुनेछ। भगवानको खातिर गरिबलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। Polycystic Ovary Syndrome को लक्षण, कारण र उपचार।
Polycystic ovary syndrome (PCOS) महिलाको हर्मोनको स्तरलाई असर गर्ने अवस्था हो।
PCOS भएका महिलाहरूले सामान्य हर्मोनको सामान्य मात्राभन्दा बढी उत्पादन गर्छन्। यो हार्मोनल असंतुलनले उनको शरीरलाई महिनावारी रोक्छ र गर्भवती हुन गाह्रो बनाउँछ।
PCOS ले अनुहार र शरीरको कपालको वृद्धि र टाउकोपन पनि निम्त्याउँछ। र यसले मधुमेह र हृदय रोग जस्ता दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरूमा योगदान दिन सक्छ।
गर्भनिरोधक चक्कीहरू र मधुमेह औषधिहरू (जसले इन्सुलिन प्रतिरोधको प्रतिरोध गर्छ, PCOS को संकेत) ले हर्मोन असंतुलनलाई सुधार्न र लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
PCOS को सम्भावित कारणहरू र महिलाको शरीरमा यसको सम्भावित प्रभावहरू हेर्नको लागि यो लेख पढ्नुहोस्।
PCOS भनेको के हो?
2. इन्सुलिन प्रतिरोध
PCOS को सामान्य लक्षण
पुरुष ढाँचा टक्कलपन
छाला कालो हुनु
PCOS ले तपाईंको शरीरलाई कसरी असर गर्छ?
गर्भावस्था र PCOS
PCOS उपचारको लागि आहार र जीवनशैली सुझावहरू
PCOS एक हार्मोनल समस्या हो जसले महिलाहरूलाई उनीहरूको प्रजनन वर्ष (15 देखि 44 वर्ष) मा असर गर्छ। यस उमेर समूहका 2.2% र 26.7% महिलाहरूमा PCOS छ
धेरै महिलाहरूलाई PCOS छ तर थाहा छैन। एक अध्ययनमा, PCOS भएका 70% महिलाहरूलाई निदान गरिएको थिएन
PCOS ले महिलाको अण्डाशयलाई असर गर्छ, एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन उत्पादन गर्ने प्रजनन अंग – महिनावारीलाई नियमन गर्ने हर्मोन। अण्डाशयले एन्ड्रोजन नामक हर्मोन पनि थोरै मात्रामा उत्पादन गर्छ।
डिम्बाशयले निषेचनका लागि पुरुषको शुक्रकीटबाट अण्डा निकाल्छ। प्रत्येक महिना अण्डा निस्कने प्रक्रियालाई ओभ्युलेसन भनिन्छ।
पिट्युटरी ग्रन्थीमा उत्पादन हुने फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हर्मोन (FSH) र ल्युटेनाइजिङ हर्मोन (LH) ले ओभ्युलेसनलाई नियमन गर्छ।
FSH ले अंडाशयलाई कूप उत्पादन गर्न उत्तेजित गर्छ – अण्डा भएको थैली – र त्यसपछि LH ले अंडाशयलाई परिपक्व अण्डा छोड्न उत्तेजित गर्छ।
PCOS एक “सिन्ड्रोम” वा लक्षणहरूको समूह हो जसले अंडाशय र तिनीहरूको कार्यलाई असर गर्छ। यसमा तीन मुख्य विशेषताहरू छन्:
अंडाशय मा सिस्ट
पुरुष हर्मोन को उच्च स्तर
अनियमित वा छुटेको महिनावारी
PCOS मा, धेरै साना, तरल पदार्थले भरिएको थैलीहरू अंडाशय भित्र बढ्छन्। “पोलिसिस्टिक” शब्दको अर्थ “धेरै सिस्टिक” हो।
यी झोलाहरू वास्तवमा follicles हुन्, प्रत्येकमा एमेच्योर अण्डा हुन्छ। अण्डालाई उत्तेजित गर्न अण्डा कहिल्यै परिपक्व हुँदैन।
अण्डाको कमीले एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच र एलएचको स्तर बदल्छ। प्रोजेस्टेरोन स्तर सामान्य भन्दा कम छ, जबकि एन्ड्रोजन स्तर सामान्य भन्दा उच्च छ।
अत्यधिक पुरुष हर्मोनले महिनावारीमा बाधा पुर्‍याउँछ, त्यसैले PCOS भएका महिलाहरूको महिनावारी सामान्यभन्दा छोटो हुन्छ।
PCOS के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा चिकित्सकहरूलाई थाहा छैन। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि पुरुष हार्मोनको उच्च स्तरले डिम्बाशयलाई हर्मोन उत्पादन गर्न र सामान्यतया अण्डा बनाउनबाट रोक्छ।
जीन, इन्सुलिन प्रतिरोध, र सूजन सबै अतिरिक्त एन्ड्रोजन को उत्पादन संग जोडिएको छ।
अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि PCOS परिवारहरूमा चल्छ
यो सम्भव छ कि धेरै जीन – एक मात्र होइन – यो अवस्था मा योगदान गर्दछ।
PCOS भएका 70% महिलाहरूमा इन्सुलिन प्रतिरोध हुन्छ, जसको मतलब तिनीहरूका कोषहरूले इन्सुलिनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
इन्सुलिन शरीरलाई ऊर्जाको लागि चिनी प्रयोग गर्न मद्दत गर्न प्यान्क्रियाज द्वारा उत्पादित हर्मोन हो।
जब कोशिकाहरूले इन्सुलिनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दैनन्, तब शरीरमा इन्सुलिनको माग बढ्छ। प्यान्क्रियाजले क्षतिपूर्ति गर्न थप इन्सुलिन बनाउँछ। अत्यधिक इन्सुलिनले अण्डाशयलाई बढी पुरुष हर्मोन उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्छ।
मोटोपना इन्सुलिन प्रतिरोधको प्रमुख कारण हो। मोटोपन र इन्सुलिन प्रतिरोधी दुवै प्रकारले टाइप2मधुमेहको जोखिम बढाउन सक्छ।
PCOS भएका महिलाहरूले अक्सर तिनीहरूको शरीरमा सूजनको स्तर बढेको हुन्छ। अधिक वजन हुनु पनि सूजनमा योगदान गर्न सक्छ। अध्ययनहरूले अतिरिक्त सूजनलाई उच्च एन्ड्रोजन स्तरसँग जोडेको छ।
केहि महिलाहरु को पहिलो महिनावारी को समयमा लक्षण देखिन सुरु हुन्छ। कतिपयले मात्र आफ्नो तौल बढी हुँदा वा गर्भधारण गर्न कठिनाइ हुँदा PCOS भएको पत्ता लगाउँछन्।
यी PCOS का सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू हुन्
अण्डाशयको कमीले प्रत्येक महिना पाठेघरको अस्तरलाई बहनबाट रोक्छ। PCOS भएका केही महिलाहरूले वर्षमा आठ महिनाभन्दा कम महिनावारी पाउँछन् वा पटक्कै गर्दैनन्।
पाठेघरको अस्तर लामो समयसम्म रहन्छ, त्यसैले तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको महिनावारी सामान्यभन्दा भारी हुन सक्छ।
यस अवस्थामा 70% भन्दा बढी महिलाहरूले आफ्नो अनुहार र शरीरमा कपाल पलाउँछन् – तिनीहरूको पछाडि, पेट र छाती सहित। कपाल धेरै बढ्नुलाई हर्सुटिज्म भनिन्छ।
पुरुष हर्मोनले छालालाई सामान्य भन्दा बढी तैलीय बनाउन सक्छ र अनुहार, छाती र पछाडिको माथिल्लो भागमा मुँहासे निम्त्याउन सक्छ।
PCOS भएका 80% महिलाहरू अधिक तौल वा मोटो छन्।
टाउकोको कपाल पातलो हुन्छ र झर्न सक्छ।
। घाँटी मुनि, कम्मर र छाती जस्ता शरीरको क्रिजहरूमा कालो दागहरू बन्न सक्छन्।
टाउको दुख्ने हर्मोनको परिवर्तनले केही महिलाहरूमा टाउको दुख्न सक्छ।
सामान्य भन्दा उच्च एन्ड्रोजन स्तरहरू तपाईंको प्रजनन क्षमता र तपाईंको स्वास्थ्यका अन्य पक्षहरूलाई असर गर्न सक्छ।
गर्भवती प्राप्त गर्न, तपाईंले ovulate गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा ओभ्युलेट नगर्ने महिलाहरूले निषेचनका लागि सकेसम्म धेरै अण्डा छोड्दैनन्। PCOS महिलाहरूमा बाँझोपनको प्रमुख कारण हो।
PCOS भएका 80% महिलाहरू अधिक तौल वा मोटो छन्। मोटोपन र PCOS दुबैले तपाईंको जोखिम बढाउँछ:
कम एचडीएल “राम्रो” कोलेस्ट्रोल।
उच्च LDL “खराब” कोलेस्ट्रोल।
: सँगै, यी कारकहरूलाई मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनिन्छ, र तिनीहरूले यसको लागि जोखिम बढाउँछन्।
यो अवस्थाले रातको समयमा बारम्बार सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जसले निद्रामा बाधा पुर्‍याउँछ।
अधिक तौल भएका महिलाहरूमा स्लीप एपनिया बढी सामान्य हुन्छ – विशेष गरी यदि उनीहरूसँग PCOS छ भने। दुबै मोटो र PCOS महिलाहरूमा PCOS नभएका महिलाहरूको तुलनामा स्लीप एपनियाको5देखि 10 गुणा बढी जोखिम हुन्छ।
Ovulation को समयमा, पाठेघरको अस्तर फुल्छ। यदि तपाइँ हरेक महिना अंडाकार हुनुहुन्न भने, अस्तर बन्न सक्छ।
पाठेघरको बाक्लो तहले एन्डोमेट्रियल क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ।
दुबै हार्मोनल परिवर्तनहरू र लक्षणहरू जस्तै अनावश्यक कपालको वृद्धिले तपाईंको भावनाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। PCOS भएका धेरै मानिसहरू अन्ततः डिप्रेसन र चिन्ताबाट ग्रस्त हुन्छन्।
PCOS ले सामान्य महिनावारीमा बाधा पुर्‍याउँछ र गर्भावस्थालाई गाह्रो बनाउँछ। PCOS भएका लगभग 70% देखि 80% महिलाहरूमा प्रजनन समस्याहरू छन्
यो अवस्थाले गर्भावस्था जटिलताहरूको जोखिम पनि बढाउन सक्छ।
PCOS भएका महिलाहरूलाई कुनै पनि शर्त बिना नै आफ्नो बच्चाको समयपूर्व जन्म हुने सम्भावना दोब्बर हुन्छ। उनीहरूलाई गर्भपात, उच्च रक्तचाप र गर्भावस्थाको मधुमेहको उच्च जोखिम पनि हुन्छ।
यद्यपि, PCOS भएका महिलाहरूले अण्डाशय सुधार गर्ने प्रजनन उपचारहरू प्रयोग गरेर गर्भवती हुन सक्छन्। तौल घटाउनु र रगतमा चिनीको मात्रा घटाउनुले स्वस्थ गर्भावस्थाको सम्भावनालाई सुधार्न सक्छ।
PCOS को उपचार सामान्यतया जीवनशैली परिवर्तनहरू जस्तै वजन घटाने, आहार र व्यायामबाट सुरु हुन्छ।
तपाईको शरीरको तौलको5देखि 10 प्रतिशत मात्र घटाउनुले तपाईको मासिक धर्म चक्रलाई नियमित गर्न र PCOS लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
: तौल घट्नुको कारण
कोलेस्ट्रोलको स्तर सुधार हुन्छ
कम इन्सुलिन उत्पादन
मुटुरोग र मधुमेहको जोखिम कम हुन्छ
तपाईलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्ने कुनै पनि आहारले तपाईको अवस्थालाई मद्दत गर्न सक्छ। तर, केही खानेकुराले अरूलाई भन्दा फाइदा लिन सक्छ।
PCOS को लागि आहार तुलना गर्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ कि कम कार्बोहाइड्रेट आहार वजन घटाने र इन्सुलिन स्तर कम गर्न दुवैको लागि लाभदायक हुन्छ।
फलफूल, सागसब्जी र सम्पूर्ण अन्नबाट कार्बोहाइड्रेटमा उच्च हुने कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स आहारले नियमित तौल घटाउने आहारको साथ महिनावारी सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
केही अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छन् कि हप्तामा कम्तिमा3दिन 30 मिनेटको मध्यम व्यायामले PCOS भएका महिलाहरूलाई वजन घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। व्यायाम संग तौल घटाउन पनि ओभुलेशन र इन्सुलिन स्तर सुधार गर्दछ।
एक स्वस्थ आहार संग संयुक्त व्यायाम अझ लाभदायक छ। आहारको अतिरिक्त व्यायामले तपाईंलाई एक्लै हस्तक्षेप भन्दा बढी वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ, र यसले मधुमेह र हृदय रोगको जोखिम कम गर्दछ। थप प्रश्न र उत्तरहरूको लागि तपाईले नूर हेल्थ लाइफलाई ईमेल र व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com